Safka & Boostada - Morningstar Stone Co., Ltd.
Xulashada Qalabka Caydhiin
Tallaabadani waa mid aasaasi ah oo muhiim u ah dhammaan tallaabooyinka la raacayo. Baloogyada dhagaxa ah ee dhagaxa ah iyo dhagxaanta si ballaadhan ayaa loogu faafiyey alaab ceeriin ah oo diyaar u ah ka shaqaynta Xulashada agabku waxay u baahan tahay aqoon nidaamsan oo ku saabsan astaamaha walxaha iyo dalab iyo maskax diyaar u ah barashada qalab kasta oo cusub. Baadhitaan faahfaahsan oo ku saabsan alaabta ceeriin ah waxay ku lug leedahay: duubista cabbirka iyo hubinta muuqaalka muuqaalka. Kaliya nidaamka xulashada ayaa si sax ah loo qabtay, badeecada ugu dambeysa waxay soo bandhigi kartaa bilicdeeda iyo qiimaha dalabka. Kooxdayada wax soo iibinta, oo raacaya dhaqanka shirkadda soo saarista oo keliya alaab tayo leh, ayaa aad ugu xeel dheer helitaanka iyo soo iibsashada qalab tayo sare leh. ▼
Faahfaahinta dukaan-sawiridda / naqshadeynta
Koox xirfad yaqaan ah oo shaqaalayn kara noocyo kala duwan oo sawir-gacmeed sawir leh oo leh aqoonta wax soo saarka lagama maarmaanka ah ayaa naga soocaya kuwa kale oo badan oo la tartamaya. Waxaan had iyo jeer diyaar u nahay inaan bixinno xalal aad ufiican oo naqshadeynta iyo fikradaha cusub ah. ▼
Shaqada gacan-qabsiga iyo mishiinadu waa kuwo is-kaabaya. Mashiinnada waxay abuurayaan xariiqyo nadiif ah iyo qurux joomatari, halka farsamada gacanta ay si qoto dheer ugu sii socon karto qaab aan caadi ahayn iyo dusha sare. In kasta oo naqshadeynta inteeda badan lagu fulin karo mishiinno, tallaabada gacan qaadka waa lama huraan in la siiyo badeecadda macaan badan iyo turxaan bixin. Naqshadeynta farshaxanka iyo wax soo saarka qaarkood, farshaxanka gacantu wali waa soo jeedin. ▼
Waxaan leenahay qayb gaar ah oo wax lagu rakibo. Iyada oo leh keyd joogto ah oo alwaax iyo loox ah ku leh warshadeenna, waxaan awood u leenahay in aan astaysto xirxirida nooc kasta oo alaab ah, midkoodna heer ama mid aan caadi ahayn. Xirfadlayaal xirfadlayaal ah ayaa xirxiraya xirmooyinka alaab kasta iyagoo tixgelinaya: culeyska xaddidan ee xirmo kasta; inuu noqdo taraatigga ka hortagga, shilka kahortagga & shoogga, biyuhu ma galaan. Xirxirid aamin ah oo xirfadle ah ayaa dammaanad ka qaadaysa in si ammaan ah loogu wareejiyo macaamiisha badeecada la dhammeeyay. ▼